See na-agba ọsọ Saturday! | Martech Zone
See na-agba ọsọ Saturday!
Akpọrọ m nwa m nwanyị gaa na nke mama ya taa maka izu ụka Mama-nwanyị. Gburugburu-njem, ụgbọala bụ ihe dị ka awa 2. Anọ m ihe dị ka maịl site na ịlaghachi n'ụlọ m mgbe m hụrụ otu obere gwongworo na-ebu m n'ihu kabanye n'ụgbọ ala dị n'ihu ya… wee pụọ! O juru m anya na ezigbo iwe ka m wepụrụ ya ma kpọọ 911 na ekwentị m. Anyị gbara ihe dị ka kilomita asatọ na mgbago ugwu ma hụ na m na-eso ya ma weta n'ụlọ ọdụ mmanụ.
Onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ na nwoke ahụ ya na ya so gbagoro na windo m wee jụọ ma m na-eso ha. M kwuru… “Uh, ee”… ọ na-ekwu, "Gịnị, m kụrụ gị !?"
Enweghị m ike ikwere ya !!! Ya mere, agwara m ya ka ọ nọrọ ọdụ nakwa na mụ na ndị uwe ojii nọ na ekwentị (ana m enye ha ntụziaka oge niile). Ọ dị ntakịrị akara ma sị “Apụrụ m ebe a” wee laghachi n’ụgbọala ya. Ahuru m nwoke ahu ya na ya na-ario, o maara na ha no na nsogbu. Ana m eme ka ọ mata na m ga-anọ ya n’azụ :).
Ya mere, ha laghachiri n'ụgbọala ahụ ma echere m na ha na-alaghachi azụ n'ihe mberede ahụ mana ọ bụ obere oge. Otu di na nwunye gafere okporo ụzọ ndị uwe ojii ahụ mechiri okporo ụzọ. Anụrụ m n'ezie ịnụ ka onye uwe ojii ahụ guzo n'okporo ámá na-efegharị ya, ọ na-anụkwa ka m na-asị, “Hey… nke ahụ bụ ha!”
N'ụzọ dị mwute, nwatakịrị dara ogbenye nke na-ebugharị Mustang ọhụrụ jidere n'etiti ihe a niile ma kpochie ụgbọ ala ndị uwe ojii tupu nwanyị ahụ akwụsị (yup, ihe mberede nke abụọ!). M wetara ma nye ihe omuma m niile.
Mgbe nke ahụ gasịrị, alaghachiri m n'ihe ọghọm mbụ ahụ ebe nwa agbọghọ nta ahụ dara ada ahụ. O wutere ya nke ukwuu mana ndị ezinaụlọ ya nyere m ọ cheụ dị mma maka ịchụ onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ.
Enweghị m ike ịgwa gị ihe kpatara m ji mee ya… mana ọ tụrụ m n’anya na ọ bụ naanị m. Nke a bụ, ọ dị nwute, nke ugboro abụọ m ahụla mpụ na anaghị ele onye ọ bụla anya ịga n'ihu. Nke ahụ dị oke egwu. Ọ BR EV na mmadụ niile emee ihe mgbe ha mere mpụ, amaara m na ọnụ ọgụgụ mpụ ga-agbadata nke ukwuu. Ihe ọghọm a metụtara ọtụtụ mmadụ! Nwatakịrị nwanyị dara ogbenye, nwa kụrụ ụgbọala ndị uwe ojii, nwanyị a na-aga n'ụlọ mkpọrọ, enyi ya nke gwara m na ọ gwara ya ka ọ kwụsị… ihe bụ Satọde maka mmadụ niile.
Ọ naghị ewe ọtụtụ ihe iji bulie mgbe ihe dị ka nke a mere. Otu onye gwara m otu oge na ọ na-ewe onye pụrụ iche… Ekwetaghị m. Abụ m nnukwu onye na-anụ kama… ọ bụrụ na ị lee ụzọ ọzọ anya, ọ ga-ekwe omume na mmadụ ga-elepụ anya mgbe ị bụ onye chọrọ enyemaka.
Esi ewepu Internet Explorer 7
Ọkt 22, 2006 na 11:07 AM
Daalụ, Sean… Adịghị m dike, enweghị ahịa mogal… mana ọ kpasuru m iwe ịhụ mmadụ merụrụ onye ọzọ ahụ wee wepụ ya. Obi dị m ụtọ na onye ọ bụla dịkwa mma, amaara m na nsonaazụ ya ga-aka njọ.
Ọkt 22, 2006 na 7:59 PM
Doug, ihe omuma banyere ahia ahia, ma akuko gi bu ihe siri ike ma nwe obi ike. Obi dị m ụtọ na agbapụghị gị, m bi na Cook County, IL. Otutu mmadu adighi acho mmasi ozo, obi di m uto na ama m onye nwere mmasi.